एनआइसी एशियाको ‘न्यू सुपर चमत्कारिक निक्षेप योजना’ सार्वजनिक - Mardi News
एनआइसी एशियाको ‘न्यू सुपर चमत्कारिक निक्षेप योजना’ सार्वजनिक
२३ पुष २०७६, बुधबार १३:१६ मर्दी न्यूज
पोखरा, २३ पुस । ‘बैंक पनि साथी पनि, हाम्रो पनि राम्रो पनि’ भन्ने मूल नाराका साथ बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको एनआईसी एशिया बैंकले ‘न्यू सुपर चमत्कारिक निक्षेप’ योजना सार्वजनिक गरेको छ ।
अँग्रेजी नयाँ वर्ष २०२० लाई लक्षित गरी एनआइसी एशिया बैंकले बुधबार बैंकको प्रदेश कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमामार्फत आप्mना योजना सार्वजनिक गरेको हो । सार्वजनिक भएको उक्त योजनाबाट ग्राहकले धेरै लाभ लिन सक्ने बैंकका गण्डकी प्रदेश प्रमुख दीपेन्द्र शर्माले बताए ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै शर्माले ‘बैंक खाता ब्याजको लागि मात्र होइन, सुरक्षा एवं सुविधाको लागि पनि चाहिन्छ’ भन्ने उद्देश्यसहित बैंकले यो योजना ल्याएको जानकारी दिए ।
यो योजना अन्तर्गत खाता खोल्ने ग्राहकले ३ वटा बीमासम्बन्धी, २ वटा कर्जासम्बन्धी र २५ अन्य फाइदाहरु गरी ३० वटा चमत्कारिक फाइदाहरु पाउन सकिने शर्माले जानकारी दिए । यो योजना अन्तर्गत २१ लाखसम्मका विभिन्न बीमा सुविधा वापत लाग्ने प्रिमियम बैंक आफैले एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई तिर्ने जानकारी दिए ।
१८ गम्भिर प्रकृतिका रोगहरुको लागी रु. १० लाख सम्मको बीमा तथा दुर्घट्नाबाट मृत्यु भएमा वा पूर्ण रुपमा अशक्त भएमा रु. १० लाख सम्मको दुर्घटना बीमा, रु. १ लाख सम्मको औषधी उपचार बीमा सुविधा, खातावालालाई कर्जाको ब्याजदर र प्रशासनिक शुल्कमा विशेष सहुलियत, कुनैपनि बैंकको एटिएमबाट रकम निकाल्दा शुल्क नलाग्ने, होम बैंकिङको सुविधा, निःशुल्क क्रेडिट कार्ड, निःशुल्क मोबाइल बैकिङ, भिसा कार्ड र इन्टरनेट बैंकिङ, अनलाइन खाता खोल्न मिल्ने सुविधा, अन्य यस्तै चमत्कारिक बैंकिङ फाइदाहरू भएको पत्रकार सम्मेलनमा शर्माले जानकारी दिए ।
त्यसैगरी ग्राहकले मासिक निक्षेप खाता अन्तर्गत जम्मा गरेको रकममा ९.७५ प्रतिशत सम्मको व्याजदर प्राप्त गर्ने जनाइएको छ । मासिक निक्षेप खाता ३ महिनादेखि १० वर्षसम्मको खोल्न सकिने शर्माले बताए ।
एनआइसी एशिया बैंकमा न्यू सुपर चमत्कारिक खाताहरु खोली चमत्कारिक प्रतिफल, सुरक्षा र सहजताको लाभ उठाउन शर्माले आग्रह गरे ।
Previous पोखरा फाइनान्सको १४.२० प्रतिशत लाभांश पारित
Next गण्डकी विकास बैंकको १२ औं साधारणसभा सम्पन्न, १७.३२ प्रतिशत लाभांश पारित
शिवरात्रीको पर्वलाई लक्षित गर्दै पोखरामा २ करोड बराबरको उखु भित्रियो
८ फाल्गुन २०७६, बिहीबार ०९:४८ मर्दी न्यूज
५ फाल्गुन २०७६, सोमबार १६:०१ मर्दी न्यूज
१८ माघ २०७६, शनिबार १०:५७ रासस
‘उपकरण खरिदमा अनियमितता भएको छैन’
वडा नम्बर १६ मा निःशुल्क खाद्यन्न वितरण गर्न अभियान
मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्दै, लकडाउन लम्बिने सम्भावना
१६ चैत्र २०७६, आईतवार १९:३१ रासस
१६ चैत्र २०७६, आईतवार १७:५२ मर्दी न्यूज
१६ चैत्र २०७६, आईतवार १७:३१ पदम घले
१६ चैत्र २०७६, आईतवार १६:५१ मर्दी न्यूज
१६ चैत्र २०७६, आईतवार १६:०३ मर्दी न्यूज
English Uncategorized अटो अन्तराष्ट्रिय खेलकुद जीवनशैली ताजा समाचार पर्यटन प्रवास फिचर फोटो ग्यालेरी बजार बैँक / वित्त भिडियो मनोरन्जन राम्रो नेपाल रोचक विश्व रोजगार विजनेश शिक्षा समाचार समाज साहित्य सूचना प्रविधि स्वास्थ्य